गोरखामा जम्मा १६ प्रतिशतले मात्रै गरे स्वास्थ्य बिमा | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : २२ कार्तिक २०७६, शुक्रबार ०८:४०
गोरखामा स्वास्थ्य बीमा सुरु भएको साढे दुई वर्षमा जम्मा १६ प्रतिशत नागरिकले मात्रै बीमा गराएका छन् । जिल्लामा २०७४ सालको असारबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो । हालसम्म कुल जनसंख्याको १६.५५ प्रतिशत नागरिक मात्रै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समेटिएका स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, गोरखाले जनाएको छ ।
२०६८ को जनगणनाअनुसार जिल्लाको जनसंख्या २ लाख ६४ हजार रहेकोमा बीमा गराउनेको संख्या भने ४३ हजार ६ सय ६६ मात्रै छ । हालसम्म सबैभन्दा धेरै गोरखा नगरपालिकामा नौ हजार नौ जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । यस्तै पालुङटार नगरपालिकामा ८ हजार ५ सय ८९ र सिरानचोक गाउँपालिकामा ५ हजार ७ सय जनाले बीमा गराएका स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, गोरखाले जनाएको छ । यस्तै आरुघाट गाउँपालिकामा चारहजार नौसय ३१, अजिरकोटमा एक हजार एक सय ३७, भिमसेन थापामा तीन हजार सातसय ९६, चुमनुब्रीमा सात सय १७, धार्चेमा एक हजार ८२, गण्डकीमा तीन हजार ६९, शहिद लखनमा तीन हजार तीनसय ५० र बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकामा दुई हजार दुई सय ८० जना बीमा कार्यक्रममा समेटिएका स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, गोरखाले जनाएको छ ।
बीमा गराउनेमा पुरुष भन्दा महिलाको संख्या धेरै रहेको छ । २० हजार ६ सय ३७ जना पुरुषले स्वास्थ्य बीमा गराएकोमा महिलाको संख्या भने २३ हजार २९ रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको गोरखास्थित कार्यालयका प्रमुख विशाल लौडारीले जानकारी दिए । हालसम्म बीमा गरेकामध्ये छ हजार ८१ जनाको भने निशुल्क बीमा गरिएको उनले जानकारी दिए । ७० वर्षभन्दा माथिका पाँच हजार नौ सय ७१ ज्येष्ठ नागरिक, ७६ जना क वर्गका अपाङ्ग र ३४ जना एचआइभि संक्रमितको निशुल्क विमा गरिएको लौडारीले जानकारी दिए । यस्तै १ हजार ४ सय ३ गरीव परिवारका सदस्यको पनि निशुल्क बिमा गरिएको छ । नयाँ बीमा दर्ता गराउनेको संख्या अपेक्षित रुपमा बढ्न नसकेपनि बीमा नविकरण गराउनेको संख्या भने बढ्दै गएको छ । गत वर्षसम्म बीमा नविकरण गर्नेको संख्या ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेकोमा पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य बीमा नविकरणको दर ७० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको कार्यालय प्रमुख लौडारीको भनाई छ ।
स्वास्थ्य बिमाको सदस्यताको लागि ५ जना सदस्य भएको परिवारलाई एक एकाई निर्धारण गरिएको छ । एउटा परिवारले बर्षको तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ तिरेपछि वर्षभरिमा एक लाख रुपैया बराबरको स्वास्थ्य सेवा लिन पाउँछन् । यदि पाँच जनाभन्दा बढि सदस्य भएको परिवार भए एक व्यक्ति बराबर सात सय रुपैयाँ थपिन्छ भने सेवा पनि १० हजार थप लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बीमा गर्ने व्यक्तिले तोकिएको कुनै पनि सरकारी अस्पतालबाट ओपीडी सेवा, इमर्जेन्सी, ल्याब उपचार, सामान्य अपरेसन लगायतका उपचारमा बार्षिक एकलाख रुपैया बराबरको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधी प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
गोरखामा जिल्ला अस्पताल गोरखा, आँपपिपल अस्पताल र मकैसिं, जौवारी र आरुघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डले उपचारका लागि सूचीकृत गरेको छ । तर, कस्मेटिक सर्जरी, व्यक्ति व्यक्तिबीचको झगडाका कारण चोटपटक लागेमा, मादक पदार्थ सेवनका कारण कुनै दुर्घटनामा परी चोट पटक लागेमा, गर्भपतन गरेमा भने यो सेवा पाउने छैनन् । यस्ता उपचारलाई बिमाले समेट्दैन् ।